Soo gudbi warbixinta hawlahaaga - Arbetsförmedlingen
Soo gudbi warbixinta hawlahaaga
Soo gudbi warbixinta waxa aad samayso
Waa inaad bil walba soo gudbisaa warbixinta waxa aad samayso. Taasi waxay muhiim u tahay sidii lagaaga caawini lahaa hab aad ku hesho shaqo ama waxbarasho oo aad u hesho lacagta meeleynta.
Sidaan ayaad u soo guidbineysaa warbixinta waxa aad qabatay
Yaa warbixin soo gudbinaya?
Adiga ka qaybqaata barnaamij meeleyn iyo annaga ayaa isla dejinnay qorshe ah inaad ka warbixiso hawlaha aad ka qaybqaadato iyo shaqooyinka aad codsatay.
Waa inaad sidaan u soo gudbisaa
Waxaad soo gudbineysaa shaqooyinka aad arjiyada u qoratay iyo dhaqdhaqaaqyada aad ka qaybgashay si aad u hesho shaqo. Waxaadna halkaas ku soo qoreysaa hawlaha qorshaha ka midka ah iyo wixii hawlo kale oo muhiim noqon kara. Kuwaan ayaa ka mid ah waxyaalaha aad warbixinta ka soo gudbineyso:
Iswiidhishka ajnebiga loogu talagalay (sfi)
wixii tababar shaqo oo aad soo qabatay ama aad codsatay
waxbarashada xirfada shaqada
waraysi shaqaalayn iyo goobo shaqooyin lagu soo bandhigay oo aad tagtay.
Sidaan ayaad uga warbixineysaa
Waxaa ugu fudud inaad warbixinahaas ka soo gudbiso barta internet. Haddaba si ay kuu suurtagasho waa inaad kood ku gashaa (sida koodka bank-id). Marka aad halkaas gasho waxaad:
qori kartaa waxa aad bishaas samaysay oo aad kaydineyso si aadan u illaawin waxyaalihii aad soo sameysey
soo gudbi warbixin
eeg warbixinihii aad horay u soo gudbisay
eeg shaqooyinka lagugu la taliyey inaad raadsato.
Sidaan ayaad ku heleysaa koodka aad ku geleyso
Haddii aadan haysan kombiyuutar ama telefoonka gacanta oo internet lagu isticmaali karo, waxaad iman kartaa halkaan oo aad ka isticmaali karto kombiyuutarada yaal.
Haddii aadan haysan koodka aqoonsiga elektaroonigga ah, waxaad warbixinaha ku qoreysa foom halkaas yaal. Foomkaas waxaad ka soo qaadan kartaa xafiisyada xafiiska shaqada midkood.
Laakiin xasuusnow in aadan warbixinahaas ku soo gudbin karin telefoon ama e-meyl aad noo soo dirto.
Goorma ayaad warbixinta soo gudbineysaa
Waxaad warbixinahaas noo soo gudbineysaa dhammaadka bil walba. Waxaad warbixinta waxa aad samayso soo gudbineysaa ugu horreyn 1da bisha iyo ugu dambeyn 14ka bil walba.
Tusaale: Inta u dhexeysa 1da iyo 14ka oktoober waxaad soo gudbineysaa warbixinta bishii sebteember.
Maxaa dhacaya haddii aanan soo gudbin warbixinahaas?
Haddii aadan soo gudbin warbixinaha wixii aad soo qabatay, waxaa dhici karta inaad heli weydo lacagta meeleynta hal maalin ama maalmo badan.
Digniin ama lacagta oo wax laga dhimo